Nubank Brazil ga-enye azụmaahịa Crypto - CoinWorldMap
Mee 14, 2022 Bitcoin
The ife nke cryptocurrency doro na Latin America na-egosi na ọ dịghị ihe ịrịba ama nke iji nwayọọ. Ụlọ akụ dijitalụ kacha ukwuu na Brazil, Nubank, ga-enye ndị ahịa ya ọrụ azụmaahịa crypto.
Nubank, dị ka akwụkwọ akụkọ Paxos kwadoro, na-achọ ịmalite ịnye ndị ahịa ya ọrụ azụmahịa crypto. Ụlọ akụ dijitalụ a ma ama nyekwaara 1% nke ihe onwunwe ya n'ịzụta Bitcoiniji gosi nkwenye ha na ogologo ndụ nke ihe onwunwe dijitalụ.
Nubank bụ ụlọ akụ dijitalụ ama ama na Brazil nwere ndị ahịa ihe karịrị nde 50 na Latin America. Nu Holdings, ụlọ ọrụ nne na nna nke NuBank, bụ ihe ruru ijeri $ 17,4 ugbu a yana Warren's Berkshire Hathaway. Buffett nwere ihe dị ka ijeri $1 ijeri mbak.
N'ụzọ doro anya, mmegharị ọhụrụ abụghị kpọmkwem ihe mbụ ụlọ akụ na-eme na oghere crypto, ebe ọ na-enyebu ndị ahịa ohere ịnweta cryptocurrencies site na ETF na ntinye ego NuInvest ya. Dị ka akwụkwọ akụkọ Paxos si kwuo, ndị ahịa ga-enwe ike ịnweta njirimara ọhụrụ na ngwa Nubank ma na-enye ọrụ ịzụ ahịa na njide maka Bitcoin na Ethereum na mmalite, na-eme atụmatụ ịgbasa onyinye n'ọdịnihu. Paxos na-ezube iwepụta ndị ahịa niile atụmatụ a na njedebe nke Julaị.
Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, ụlọ ọrụ akụrụngwa blockchain Paxos ga-enye ọrụ njide na ụlọ ahịa maka njirimara a. Nke a abụghị nke mbụ Paxos na-abanye na mmekorita dị ka nke a na mpaghara ahụ, December gara aga Paxos sokwara Mercado Libre, ụlọ ọrụ e-commerce kasị ewu ewu na Latin America, mee ka ọrụ azụmahịa crypto dị maka ndị ahịa na Mercado Pago. dijitalụ obere akpa ikpo okwu.
David Veles, CEO na Onye guzobere Nubank, kwuru na nkwupụta na ọ bụ ezie na nkuchi crypto na-eto eto na mpaghara ahụ, ahịa na-apụta ka na-esiri ọtụtụ ndị ike, oghere Nubank na-ezube imechi ya na onyinye ọhụrụ ya. Veles kwuru, sị: "Na Nubank, anyị na-agba mbọ inye ndị ahịa anyị ikike site n'inye ha ikike ịchịkwa ego ha. Ya mere, anyị mepụtara interface nke dị mfe ma nwee nghọta zuru oke iji gbasaa ohere ịbanye na ngalaba ọhụrụ, ebe ọ na-anọgidesi ike ma dị ike maka ndị ọzọ cryptocurrency savvy. "
Nkuchi Cryptocurrency Latin America na-aga n'ihu
Dị ka Chainalysis si kwuo, Latin America bụ onye ndu ugbu a na nkuchi bitcoin zuru ụwa ọnụ, ekele na akụkụ nke ọrụ nke ndị omebe iwu na-emepụta iwu ndị dị mma maka cryptocurrencies. Brazil, obodo kachasị ukwuu na mpaghara ahụ, na-akpata ihe karịrị ijeri $125 ugbu a na ụlọ ọrụ crypto nke mpaghara ruru ijeri dollar 500.
Dị ka ihe ncheta, Brazil nọ n'ụzọ ịbịanye aka n'iwu cryptocurrency ya na njedebe nke afọ. Ụgwọ ahụ, ọ bụrụ na agafere, ga-eme ka mba Latin America bụrụ ebe nchekwa maka ndị na-egwupụta bitcoin green.
N'ikwu okwu banyere mmetụta nke Nubank ọhụrụ crypto trading ọrụ na crypto nkuchi na mpaghara, Charles Cascarilla, ngalaba-nchoputa na CEO nke Paxos, kwuru, sị: "The ụlọ ọrụ ruru na mmetụta n'akụkụ dị iche iche nke mba ahụ na-ahụ na ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịbanye na crypto. karịa mgbe ọ bụla ọzọ. Mkpebi Nubank ịbanye n'ahịa ahịa crypto na-anọchi anya usoro atụmatụ ọ bụghị naanị maka ụlọ ọrụ ahụ, kamakwa maka ịkwalite nnabata nke cryptocurrencies na mpaghara ahụ."
Mwakpo phishing ahọrọla ndị cryptanalyst
Ụlọ ọrụ blockchain na-ahapụ Vietnam
SEC na-arịọ maka mmefu ego maka nyocha crypto